Usuku My Pet » 5 Izindlela Thola Love of Life Your!
Sonke njalo, ukuthi unganakile noma uyaqaphela, afuna the one. Lokho umuntu sikwazi ukudlulisela ukuphila kwethu futhi ngubani uzoyeka us kokukhuthazelela isiphetho ophilayo in a flat kanye Fluffy the cat. Nazi izindlela ezinhlanu nje ukugwema ukuthi ukudalelwa futhi kokuba amanani ezingenakubalwa of cat ukudla ukukhokhela!
Ingabe A Class Night
Interest Common kuyisihluthulelo lapha. Kungakhathaliseki ukuthi photography noma ngokubhala creative, njalo ukhethe isigaba okuyinto sihlanganisa izithakazelo zakho ebusuku. Ukuqonda kuyinto enkulu uma kuziwa ekutholeni soulmate. Kufanele uthole nomunye yingakho izinhlobo eziningi kangaka cool gravitate towards nomunye futhi abaningi kangaka eccentrics ethule gravitate towards nomunye. Ngakho uma ukhetha ikilasi ebusuku ngalo wena unesithakazelo kwandisa amathuba uzothola abantu like nje wena.
Inkantini / Clubs
In abantu jikelele, baye komunye nomunye imigoqo kanye nemishiza njengokungathi kakhulu manje ngoba besaba abantu bangase bacabange ukuthi bakhululekile aqala noma into. Kodwa kunjalo namanje ubeka lapho uthando kungaba bungakhula. Njengoba isiphuzo ageleza abantu musa bathambekele sikhathazeke wenxenye yalokho yini abantu bacabange ukuthi noma sikhathazeke ngokuthi okuningi ngalokho ukusho ngakho ukungayi aziyi ezindaweni ezinkulu ukuhlangabezana abantu. Ngokusobala bengingeke ukweluleka uya ekhaya nabo ngalobo busuku kodwa uthathe inombolo yabo. Kungaba isiqalo okuthile.
Umsebenzi lapho iningi labantu ukuthola uthando ukuphila kwabo njengoba yisicefe njengoba lokho kuzwakala. Ngakho zama ukuba umsebenzi omthandayo uma unga futhi kukhona ithuba elikhulu uyobe chofoza umuntu omthandayo. Futhi uma unamahloni nxazonke kubo, ungakhathazeki. Uma kwakusho ukuba kwenzeke, uzoba kwenzeke. Futhi uma kungenjalo, kukhona inala fish more in the sea njengoba besho.
The circuit gigging kuhle okuhlangana nabantu. Kufana le circuit bar kuphela ukuthi ungakwazi ukugqashula iqhwa ngokuthi into efana, “Ngangimthanda ukuthi Riff wena wadlala.” Kuyindlela elula kakhulu ukuhlangabezana omunye futhi eziningi nabangane endleleni kanjalo bafunde insimbi yomculo, uma ungenawo kakade ukudlala eyodwa, futhi siphume wenze ezinye Gigs.
Musa Vela Desperate
I ohlwini izindlela ezine ukuhlangabezana omunye kodwa last cishe ebaluleke kakhulu. Kufanele uqinisekise ungezi ngaphesheya like ukuphila kwakho kugxile ekutholeni nomuntu ngeke awuqede. Qinisekisa ukuthi inala uke kwenzekani ekuphileni kwakho futhi behlangana nomuntu kumane nje kuyingxenye omunye umsebenzi wakho, hhayi sonke mission. Ngamanye amazwi kufanele sibonise ukuthi wena uqine ngokwanele ukuba baphile nge Fluffy in the flat ngisho noma akunjalo kanjani ngokukhethekile Ubucabanga ikusasa lakho. Avele beqiniseka in esikhunjeni sakho siqu. Akukho lutho ekhanga.